गुल्मीमा भेटियो यस्तो अ’चम्मको गाई , गाईमा आयो देवीको अ’वता’रकहिले सुन्नुभएको छ त ?(भिडियो सहित):: Mero Desh
गुल्मीमा भेटियो यस्तो अ’चम्मको गाई , गाईमा आयो देवीको अ’वता’रकहिले सुन्नुभएको छ त ?(भिडियो सहित)
Published on: १८ चैत्र २०७७, बुधबार ०५:५५
यो घ’ट’ना हो गुल्मी छत्रकोट गाउपालिका हुु“गा झेर्दी भन्ने ठाउको जहाका टिकाराम न्यौपानेको घरमा यस्तो अचम्म को गाई रहेको छ जस्को बारे आज हामी यहा“ च’र्चा गर्दै छौ । प्राय सबै नेपालीहरु गाइलाई लक्ष्मी माताको रुपमा पुज्ने गर्छन र हिन्दू धर्मावलम्बी त झन गाईलाई सर्बश्रेष्ठ प्रा’णी मा’न्दै दे’बीको अ’वतार मान्छन ।
यो पनि,,भाइरल चियावालिको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक,एकैछिनमा भयो भाइरल,लाखौले हेरे ( भिडियो हेर्नुस् )
“अहिले चियावालीको उपनामले सामाजिक संजालमा निकै नै भा’इरल बनेकी नुवाकोटकी सृ”ष्टि तामाङ जो आफ्नो दुई वर्षको आफ्नो दुधे बालकलाई आफ्नो पिठ्युँ मा बोकेर रातको तीन ब”जेदेखि चिया बनाउँदै र बेच्दै आउनु भएको छ।
“उहाँको माइतीघरतिर दिदीबहिनीहरू भएता पनी घर’पटी चाहिँ खासै कोहि हुनुहुन्न रहेछ। उहाँको श्रीमान चाहिँ अहि ले सुनधारामा सानोतिनो ठेक्कापट्टा गर्नुहुँदो रहेछ। यद्यपि अहिले उहाँ श्रीमती र छोरी छोडेर पारीवारिक जिम्मेवारी विहीन भएर बस्नुभएको रहेछ। उहाँ घर पनि आउनुहुँदो रहेनछ।
“तर एक्कासि सामाजिक सं”जालबाट आफ्नो श्रीमती को भाइरल समाचार आइसकेपछी उहाँले फोन चाहिँ गर्नु भएको थियो रे। यति धेरै दुख गरेर बसेको थाहा थिएन भन्नुभयो र रुँदै फोनमा कुराकानी गर्नुभएको रहेछ।
“उनले बताइन् । यशैबिच अहिले तिनै भाइरल चियावालि मा आ’धारित मिउजिक भिडियो समेत सार्व”जनिक भए को छ ।यश मिउजिक भिडियो मा कल्पना दाहाललाई पनि देख्न सकिन्छ र केही समयमै सो मिउजिक भिडियो भाइ -रल नै भयो ।